Blog akụkọ na Ụgwọ Ọrụ Ụgwọ: Ịhụnanya, Mmekọahụ na Intanet
Home Blog akụkọ
adminaccount888 6th June 2021 Akụkọ kacha ọhụrụ
Obi dị anyị ụtọ ịnata kọntaktị site n'aka Dr Marshall Ballantine-Jones PhD si Australia izu 2 gara aga nke o ji mmesapụ aka tinye otu akwụkwọ edemede nke PhD. N'ịbụ onye akụkọ ya kpaliri, anyị soro mkparịta ụka Mbugharị ụbọchị ole na ole…
adminaccount888 30th May 2021 Akụkọ kacha ọhụrụ
Ọ bụ nnukwu ihe mwute na anyị na-ekwupụta ọnwụ nke onye anyị hụrụ n'anya na onye ọrụ ibe anyị, Gary Wilson. Ọ nwụrụ na 20th May 2021 n'ihi nsogbu nke ọrịa Lyme. Ọ na-ahapụ ya…
adminaccount888 18th May 2021 Akụkọ kacha ọhụrụ
N'ihe banyere nhoputa ndi ochichi na 2019, gọọmentị UK kwụsịrị Nkebi nke 3 nke Digital Economy Act 2017 otu izu tupu ụbọchị mmezu ya. Nke a bụ iwu echere ogologo oge nke a pụtara na nkwa ahụ…
Isiokwu nke ọdịnaya Isi nke Porn Risks Adolescent Brain Research sitere na British Board of Film Classification Videos iji nyere aka kpuchido ndị na-eto eto Nyere ndị ahụ mkparịta ụka siri ike Ndụmọdụ dị elu maka ịgwa ụmụaka Ndụmọdụ kachasị elu banyere smartphones Gịnị ngwa nwere ike…
adminaccount888 11th May 2021 Akụkọ kacha ọhụrụ
Ọ bụ ihe ijuanya ịnụ ka otu nwatakịrị nwanyị dị afọ 14 kpọsara gwa anyị na ọ "nọ na kink". Anyị nọ n'ihu 20 ndị ọzọ na-eto eto na-ekwu okwu banyere ihe ize ndụ ndị nwere ike ịntanetị. Nke ahụ adịworị afọ atọ…
adminaccount888 29th March 2021 Akụkọ kacha ọhụrụ
Ọ bụ ụbọchị ihe nwute mgbe ndị na-eto eto kwesiri iji aka ha chebe onwe ha iji chebe onwe ha site na webụsaịtị mgbochi mmeko nwoke na nwoke dika Onye obula Akpọrọ. Ọdịda nke gọọmentị mee ihe igbochi ohere ịnweta saịtị porn nke ụmụaka na…
adminaccount888 25th March 2021 Akụkọ kacha ọhụrụ
Nnyocha kachasị elu nke ụwa gbasara ahụike mmekọahụ na 2019 guzobere na ihe dịka 20% nke ụmụ nwoke nọ n'etiti afọ 15-89 na-ele egwu karịa ka ha chọrọ. Ọtụtụ n'ime anyị, ruo n'ókè ụfọdụ, na-ekwughachi ụfọdụ àgwà ndị anyị maara na-emerụ…
adminaccount888 1st March 2021 Akụkọ kacha ọhụrụ
Blog ọbịa a bụ John Carr, otu n'ime ndị isi ụwa na-eduzi ụmụaka na ndị na-eto eto na ịntanetị na teknụzụ ọhụrụ metụtara. N'ime ya ọ na-egosi na o nwere ike (na-agbawa obi) mmetụta nke Facebook amaghị na encrypt…
adminaccount888 14th nke February 2021 Akụkọ kacha ọhụrụ
“Lovehụnanya? Bụrụ ihe omimi. ” Mana otu ụzọ iji nyere aka iwepụ ya bụ ịghọta asụsụ ise nke ịhụnanya. Jiri ngwa mmekọrịta a mee ka ndụ ịhụnanya gị ka mma. Suzi Brown, onye nkuzi nke Foundation Reward Foundation, weputara n'okpuru otu anyi nwere ike isi…
adminaccount888 9th nke February 2021 Akụkọ kacha ọhụrụ
Okwu gbasara ime ihe ike megide ụmụ nwanyị na ụmụ agbọghọ nọ n’ụwa taa dị oke njọ. Atụmatụ maka ime ihe ike n'ụlọ, mmụba na-egbu egbu na nke iyi egwu mmekọahụ na iyi egwu mmekọahụ na-aga n'ihu na-ebili na oke egwu, ọkachasị na mkpọchi. Abụọ na nso nso a…
Page 1 nke 15